टुँडालदेवीको जात्रामा भाट भटेनी माता र बाबाको यात्रा, टुँडालदेवी माताको आगन सम्म (भिडियो सहित) -
Homeसमाचारटुँडालदेवीको जात्रामा भाट भटेनी माता र बाबाको यात्रा, टुँडालदेवी माताको आगन सम्म (भिडियो सहित)
April 28, 2021 admin समाचार 569
टुँडाल देवीको प्रसिद्ध मन्दिर काठ’माडौंको हाँडीगाउँनजिकै बालुवाटारमा छ । यी देवीलाई वैष्ण’वी देवी पनि भनिन्छ । यिनलाई किन टुँडाल देवी भनि’यो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । सम्भवतः प्रारम्भ’मा यस मन्दिरमा पूजाआ’जाका लागि देवीको मूर्ति टुँडालमा राखि’एको थियो । त्यही भएर देवीको नाम टुँडाल देवी पर्न गएको हुन सक्तछ । उक्त मन्दिर लिच्छविकालतिरै स्था’पना भएको मानिन्छ ।
टुँडाल देवीको मन्दिर वि’भिन्न प्रकारका कलाकौशलले भव्य र कलात्मक छ । चैत शुक्ल पूर्णि’माका दिन यिनको जात्रा पनि हुने गर्दछ । जात्राका अव’सरमा टुँडाल देवीको मूर्ति खटमा राखेर हाँ’डीगाउँ क्षेत्रमा घुमाइन्छ । उक्त जात्रालाई गहना खोज्ने जात्रा पनि भनिन्छ । किंवदन्ती अनुसार, टुँडाल देवी, नक्साल भग’वती र भाटभटेनी नातेदार थिए । एक दिन यी तीनै जना घुम्नलाई बाहिर निस्कँदा टुँडाल देवीका गरगहना एउटा पो’खरीमा खसेर हराएछन् ।
पछि चैत शुक्ल पूर्णि’माका दिन उनका गहना एउटा पोखरीमा भेटिए । त्यही खुसीयालीमा उनको रथयात्रा गर्न लागिएको हो । रथयात्राका अवसरमा गहना’पोखरीमा पुगेर त्यही पो’खरीमा गहना खोज्ने चलन आजसम्म पनि छ । उक्त पोखरीमा गहना खोज्ने उत्सव गरिने हुँदा उक्त पोखरीलाई नै गहना’पोखरी भन्ने गरिएको हो । वि.सं. १८३० सालमा पृथ्वीना’रायण शाहले १२९ रोपनी जग्गा यस’का लागि गुठी राखिदिएको लिखत पाइन्छ । त्यसपछि मात्र यि’नको प्रचार–प्रसार ज्यादा मात्रामा भएको हो । इताजा खबरबाट
कोरियन भाषा परिक्षा पास भएका र पढ्दै गरेका हरुको भविष्य अब के हुन्छ ? कस्तो छ कोरिया जाने सम्भा’वना ? (भिडियो सहित)
November 24, 2020 admin समाचार 3740
September 16, 2020 admin समाचार 7705
March 7, 2021 admin समाचार 2177
भिडियो तल दिइएको छ हेर्नुहोला। नगदे बाली’का रुपमा रहेको चियालाई प्रवद्र्ध’न गर्न झापालाई ‘चिया जोन’का रुपमा वि’कास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय झा’पाले चिया सरोकार पक्षसँग आज
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (174778)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (168517)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (168274)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (167932)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (166933)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (165694)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (165146)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (163636)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (158254)